Barcelona Oo Heysata Fursad Ay Ugu Dhawaan Karto Hogaamiyaasha Horyaalka Spian.
HomeHoryaalka SpainBarcelona oo heysata fursad ay ugu dhawaan karto hogaamiyaasha horyaalka Spian.
March 14, 2021 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Barcelona ayaa fursad u heysata inay farqiga dhibcaha soo jarto iyadoo Atletico Madrid ay afar dhibcood ka sarreyso La Liga barcelona ka dib markii hoggaamiyeyaasha ay barbaro 0-0 ah la galeen kooxda Getafe Sabtidii.
Getafe ayaa casaan laga siiyay Allan Nyom qeybtii labaad ee ciyaarta Diego Simeone kooxda ma aysan helin waddo ay ku dhaafaan kooxda martida loo ahaa, ciyaartuna waxay ku dhamaatay goolal la’aan.
Bartilmaameedka ayaa ka dhigaya in Atletico madrid wili hogaanka ku hayaan 7 dhibcood oo ay ka horeeyaan barcelona laakiin Blaugrana ayaa yareyn kara kala duwanaanshaha farqiga dhibcaha oo ka dhigi karto afar haddii ay ku guuleystaan kulankooda gacanta ay ku heystaan ee Camp Nou kula ciyaarayaan kooxda Huesca maalinta Isniinta.
Real Madrid, ayaa dhanka kale haatan u jirta lix dhibcood kooxda Atletico ka dib markii Karim Benzema uu ka caawiyay inay 2-1 ku garaacaan Elche galabtii Sabtida.
Luis Suarez ayaa ku soo dhowaaday dadaal adag oo uu ku garaacay jagadaas, halka Marcos Llorente iyo badalka Moussa Dembele ay sidoo kale heleen fursado.
Barçelona ayaa ah koox aan 16 kulan laga badinin horyaalka waxaana ay kor u qaadi karaan cadaadiska ay ku hayaan Atletico Isniinta iyadoo guul ay ka gaaraan Camp Nou si ay u sii wadaan qaab ciyaareedkooda cajiibka ah 2021.